XOG: Liverpool Oo Jawaab Ka Bixsay Wararkii Sheegayay In Iska Diiday Dalab 2 Bilyan Ah Oo Uu Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehayan Kula Wareegi Lahaa Mulkiyada Reds. | Raadgoob
Waqtiyadii ugu danbeeyay waxaa soo baxayay warar sheegayay in mulkiilyaasha kooxda Liverpool ee ay iska diideen dalab 2 bilyan gini ah oo uu mulkiyada kooxda kagala wareegi lahaa ninka ay mulkiilaha Manchester City ee Sheikh Mansour ilmaadeerka yihiin ee Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehayan.
Waxayna wararku sheegeen in shirkada Fenway Sports Group ee mulkiyada Liverpool iska lihi ay dalabkan iska diiday si ay kooxda u sii haystaan isla marakaana ay shaqadooda fiican u sii wadan karaan iyada oo maalqabeenka ree Abu Dhabi ee Sheik Khaled Bin Zayed Al Nehayan uu dalabkan ku hungoobay.
Laakiin kooxda Liverpool ayaa ka jawaabtay wararka xanta suuqa ee ay saxaafada England iyo aduunka isla dhex marayeen waxayna cadeeyeen in kooxda Liverpool ayna marnba iib ahayn balse ay u furan yihiin in ay bixiyaan saami kooban oo maal gaashi ah.
Press Association Sport ayaa fahansan in mulkiilayaasha Liverpool ay heleen xiisaha maal gashadaal doonayay in ay kooxda la wareegaan laakiin dalabyadan ayaa suurtogal noqon waayay markii mulkiilayaasha Liverpool ay gabi ahaanba meesha ka saareen in Reds ay iib ka tahay.
Shirkada Fenway Sports Group ayaa horumar wayn ku samaysay Liverpool tan iyo markii ay la wareegtay mulkiyada kooxda iyada oo xataa dib u balaadhin ku samaysay Anfield halka ay maal galin waali ah ku caawisay Jurgen Klopp kaas oo hadda haysta koox uu ugu tartami karo Premier league iyo Champions league.
Warka Liverpool ayaa lagu yidhi: “FSG waxay ahaayeen kuwo cad oo joogto ah- kooxdu iib ma aha. Laakiin markale mulkiyada kooxdu waxay u sheegtay si cad oo joogto ah in qodobo iyo xaaladO ku haboon aanu tix galin karno qaadashada maal galiye yar, haddii xidhiidhka noocani ahi uu sii kordhinayo danahyaga ganacsi ee meelo gaar ah oo suuqa ah oo la jaan qaadaysa horumarkii iyo korintaankii kooxda ee soo socday”.
Mulkiilayaasha kooxda Liverpool ayaan doonayn in ay kooxda iibiyaan balse waxay sida qoraalka ka muuqata u furan yihiin in saami ama share kooban ay bixiyaan si danaha ganacsi ee suuqa ay ugaga faa’iidaystaan maal gashiga ay saamigan ku iibin karaan.
Qorshaha mulkiilayaasha Liverpool ayaa la mid ah talaabadii uu sanadkii 2015 kii qaaday mulkiilaha kooxda Manchester City ee Sheikh Mansour kaas oo saami boqolkiiba 13% ah oo kooxdiisa ah ka iibiyay shirkad ree China ah isaga oo dhaafsaday aduun dhan £265 milyan gini.
Mulkiilaha Liverpool ee John Henry, gudoomaha kooxdiisa Reds ee Tom Werner iyo waliba madax waynaha Shirkada FSG ee Mike Gordon ayaan ku qancin dalabadyadii kooxdooda lagu doonayay ee maal gashi kaas oo uu u xilsaarnaa bank Allen & Company.
Shirkada Fenway Sports Group ee magaceeda loo soo gaabiyo FSG ayaa October 2010 kii kooxda Liverpool ku iibsaday 300 milyan gini oo kaliya waxayna Anfield ku balaadhiyeen 115 milyan gini halka markale ay qaybta 50 milyan gini ku dhisayaan xarun tababar oo cusub.
Laakiin shirkada Fenway Sports Group ayaa si laayableh ugu guulaystay inay Jurgen Klopp ka saxiixdeen heshiis lix sanadood ah isla markaana ay siiyeen lacagtii uu suuqa uga baahnaa isaga oo xagaagii 2016 oo kaliya kharash gareeyay 170 milyan gini halka sanadkan uu markale lacago rekoodh ah kula soo wareegay Virgil Van Dijk iyo Alisson Becker.
Si kastaba ha ahaatee, shirkada Fenway Sports Group ayaa si wayn sare ugu soo qaaday sumcadii Liverpool tan iyo markii ay mulkiilayaashii hore ee Maraykanka ahaa kooxda kala wareegeen waxayna hadda diideen dalab aan la rumaysan karin oo ay kooxda ku fasixi kareen balse rajada ay ka leeyihiin ayaa ka waynaatay.